Chigadzirwa Chigadzirwa: isina simbi pea kupisa kuchengetedza mukombe
Chinyorwa: 304 simbi isina simbi
Kukura: 6.5cm muhupamhi uye 20cm pakukwirira
Mutengo: US $ 17.8 27181
Minimum odha uwandu: 2
Maitiro: customizable logo
Ruvara: chena, nhema, pink, nezvimwe.
Zvimiro: Ratidziro ye LED yakangwara, kuyerwa kwetembiricha yakangwara, bhureji yakavhurika, yekuvhara kwenguva refu, bhatani rimwe rakavhurika, mukombe wakakomberedza muromo, anti-skid coaster.
1.No leakage Hapana kusiyiwa,
Usafunge kuti iyi idambe. Muchokwadi, izwi iri rine zvirevo zviviri: kune rumwe rutivi, rakasimba uye kune rimwe divi kuchengetedzeka. Mamiriro ezvinhu emusango akaomarara, uye mapundu akaoma kunzvenga. Kana iyo ketera isina kusimba zvakakwana, mhedzisiro inogona kufungidzirwa. Saizvozvowo, kana kuvhurwa kwayo kukasavharwa zvakasimba, hakungorasikirwi chete nemvura yakakosha musango, asi kunogona kunyorovesa mbatya, zvishandiso nezvimwe zvinhu zvayakatakura. Kana zvinhu zvakakosha zvakaita sekudya nembatya zvikaurayiwa, unogona kuuraiwa mune dzimwe nharaunda dzakanyanya.
2.Easy kutakura Portability.
Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mabhodhoro emvura anoshandiswa panze, dzimwe nguva pamabhasikoro uye dzimwe nguva pamadziro edombo. Izvi zvinoisa pamberi zvinodikanwa zvekutakurika kwemabhodhoro emvura. Mimwe midziyo yakagadzirwa nezvinhu zvakapfava, senge mabhegi emvura uye keturu dzeganda, zvine mukana wekusagadziriswa. Huwandu hwavo uye chimiro zvinogona kuchinjwa pazvinenge zvichidikanwa. Iri riri chokwadi vhangeri remuhomwe wako wakawandisa.
3. Yakagadzirirwa kushandiswa kwakakosha Yakagadzirirwa kushandiswa kwakakosha,
Iyo yekunze nharaunda inosiyana zvakanyanya, uye kune akawanda marudzi emitambo yekunze. Mune zvimwe zviitiko, mabasa akajairika haakwanise kusangana nezvinodiwa. Mune iwo mamiriro ezvinhu apo ruoko rumwe chete runogona kushandiswa kunwa, muromo webhodhoro unogona kuvhurwa nekuvharwa neruoko rumwe kana nemeno zvakanyanya kukosha. Kana paine huwandu hwakawanda hwevanhu uye kudikanwa kwekudzika musasa uye pikiniki, bhodhoro rakapetwa Mugomo uchasangana zvinobudirira nezvinodiwa nekamba yemvura. Mumamiriro ezvinhu akaomarara senzvimbo dzakakwirira dzakakwirira kana nzvimbo dzine polar, keturu yakadzivirirwa inoita kuti mvura yako isaome haizokupi kunetseka.
Pashure: Kunze Kwakavharirwa Kuchenesa Kunwa Doro Cocktail Waini Girazi Bamboo goko Stainless Simbi Mukombe
Zvadaro: simbi isina kukora cola bhodhoro inovhara kapu
30oz Stainless simbi tumbler kofi muguri ...
304 Stainless simbi nakisa-hombe chinzvimbo Vacuum ...
simbi isina chinhu yekukosha mukombe ine mubato
Vacuum chinu hombe chinzvimbo Stainless simbi vac ...
Stainless simbi diki muromo kupisa kupisa mukombe